Uma unesithakazelo vayping noma hambisa ugwayi electronic, okusho unqume ukulahla imikhiqizo avamile Imboni kagwayi futhi, mhlawumbe, kusukela umlutha kagwayi bebonke. Lena nakanjani isenzo ukufanele ukudunyiswa futhi sibonga esikhulu kusukela kokubili emzimbeni wakho kanye nabantu abaseduze kwabo. Kodwa ngenkathi adikibale-nicotine namanje esikhathini esizayo, ake sixoxe okudlekayo eziyisisekelo ezisetshenziswa ngesikhathi vaypinga - ketshezi, okuyinto icala e-ugwayi.
Hlobo luni uketshezi kuthini aqukethe?
Ngakho, i-liquid ugwayi electronic - ikhemikhali batheleka a igobolondo okhethekile. Ngemva kokuphendukela kwi e-ugwayi uqondisa Ukwakheka atomiser, isici kabani Ukushisa obangela ukuhwamuka ketshezi kanye ukuguqulwa ibe umusi elimnandi. It futhi ngeke donsa. Qaphela: umusi, angibhemi, lapho ngaphezu-nicotine equkethwe futhi uhlu olukhulu eziyingozi kugwayi amandla omlilo (azungeze 4000)! Futhi izindaba kuqala okuhle nengxoxo yethu mayelana liquid ugwayi electronic, ukuthenga ukuthi namuhla akuyona sibonga nzima ezihlukahlukene abakhiqizi, brand ezithengisa ezikhethekile.
E-Liquid ugwayi ngokuvamile kuhlanganisa izingxenye ezine eziyinhloko:
Propylene glycol - kungenambala ketshezi viscous okuyinto isisekelo emikhiqizo eminingi zokwelapha yezimonyo, noma ekhona Ukwakheka kwabo njengoba isakhi magciwane. Futhi ivunyelwe ukusetshenziswa njengendlela okufakiwe ukudla.
Glycerol - kungekho nto enemibala emihle, uketshezi oily esisetshenziselwa ekukhiqizeni izimonyo nemihlobiso, ekukhiqizeni confectionery ebhikawozi imikhiqizo. Ngokwesibonelo, glycerol ngcono ukungaguquguquki ushokoledi, kuvimbela staling okusheshayo isinkwa, pasta Ukunamathela phakathi kwenqubo ukupheka.
I-nicotine - ikhemikhali kuletha ukulinyazwa emzimbeni, futhi yini zikuqinisekisa ngeke kube namuntu. Nokho, izinga umdlavuza kunqunywa inani nicotine kanye ezingeni layo ukwelashwa enqubeni ukukhiqizwa. Ukuze uqhathanise: i-electronic ugwayi uketshezi iqukethe cishe ingxenye efanayo nicotine njengendlela patch yezokwelapha noma ushingamu, i-nicotine isetshenziswa kanye ngezinga eliphakeme zokuhlanjululwa. Kodwa kukhona beznikotinovye uketshezi ukuthi ngokuvamile ekhethwe labo kakade besusa ukuluthwa kuyabulala, kepha namanje ine ziyezwana kuya kakhulu 'obungokwesiko. "
Flavour - izingxenye ezenza liquid ugwayi electronic "okumnandi." ugwayi flavour Popular, ikhofi, izithelo, futhi engavamile, isibonelo, inkukhu eyosiwe noma Red Bull. Sekuvele kukhona omunye uyazinqumela, ngokusho ukunambitheka okuthandayo. Ukubhuka kodwa ngamakha equkethe liquid ugwayi electronic, - akusiyo "amakhemikhali okuqinile eziyingozi" kanye izithasiselo kuvunyelwe ezimweni eziningi banendabuko zemvelo.
Vele amaqiniso ambalwa ukuqhathanisa
Ngokuvamile iqala ababhukudi bazibuze ukuthi bungakanani kune nicotine liquid ugwayi electronic. Thenga ingxenye inqaba kangcono Viper-Wabasaqalayo, futhi yini - cishe khulula kusuka umlutha kagwayi kubantu? Lolu ketshezi ingaqukatha 0, futhi bonke 8 no-36 mg nicotine ngamunye 1 ml. Predictably, lona wamuva iyona eyizingqabavu kakhulu iphathelene izingoma zazo ngokuvamile esetshenziselwa diluting uketshezi ukuxegiselwa.
Heavy ababhemayo, bona - yezinyoka esanda kwenziwa, ngokuvamile akhethiwe ukwakhiwa amandla 18 mg / ml. Isilinganiso ngelanga ibusa 1 ml ewuketshezi, kodwa uqaphele ukuthi umzimba engakutholi zonke 18 mg nicotine, kodwa% 30-50 kuphela, isb ezingeqi kwezingu 9 mg. Ukuze uqhathanise: umuntu okhetha Marlboro ukukhanya, uzothola emva 10 osikilidi ngibhema-nicotine 4 mg + 40 mg itiyela carcinogens. Futhi lokhu naphezu kweqiniso lokuthi kagwayi kanye iphakethe (osikilidi 20) ngelanga - awapheli!
Lapho ukuthenga ikhwalithi "ezihlwabusayo" ketshezi?
Ukwakhiwa ngoba vaypinga namuhla ukunikela ezimakethe eziningi eliwumhlaba futhi ebonakalayo. Uyakhuthazwa ukuthi uziqaphele digital Boutique futuland.ru, ngoba inikeza izinhlobo ezingaphezu kuka angamakhulu ayisithupha uketshezi for e-ugwayi, futhi okubaluleke kakhulu, ukuqinisekisa izinga yabo. Ngakho uthi "cha" eziyingozi kagwayi kanye "yebo" - guy uketshezi elimnandi kusuka abakhiqizi omethembayo!
Liquid Ecoliquid for ugwayi electronic (ukubuyekezwa)
Ukubhema Izinzuzo: Yinganekwane Noma Yiqiniso?
Sisyphean umsebenzi, noma ukunciphisa abavilapha